Liban’s Story: Hardship beyond all expectations - Telling the Real Story
Liibaan waa wiil Soomaali, oo ku nool Jarmalka oo gurigiisa ka cararay markii naftiisa loo hanjabay. Ka dib markii uu si gaabis ah oo dulqaadasho leh uga gudbey saxaraha Saharan, wuxuu laba jeer ka dhoofay xeebta Liibiya, isagoo khatar geliyay badda Mediterranean si uu u aado Yurub. In kasta oo uu si fiican u yaqaanay tahriibiyeha maraya Suudaan iyo Libya waxa uu ahaa mid khatar ah, waxa uu ku soo maray safarka aad ayuu uga sii xumaa sidii uu filayay.
“Waxyaabihii aan la kulmay safarkaas waxay boqol jeer ka xun yihiin waxa aan ka cararayey. Haddii aan ka fekero halganka iyo caqabadaha aan soo maray, way i dhaawaceysaa, marka waxaan isku dayaa inaanan ka fikirin. ”
Ka dib markii uu dhex maray Itoobiya iyo Suudaan, Liibaan wuxuu galay Liibiya. Kuleylka ayaa ahaa mid aan loo dulqaadan karin, laakiin wuxuu rajeynayay inuu sida ugu dhakhsaha badan ugaga gudbo. Hase yeeshee isaga iyo kuwii la socdayba waxa lagu haystay meel ku taal Sahara dhexdeeda, halkaas oo ay ku joogeen saddex bilood oo naxariis darro ah. Tahriibiyeyaasha ayaa dalbaday lacag kuwa doonaya inay sii wadaan. Kuwii bixin kari waayey ayaa si xun loo garaacay. Liibaan ma uusan haynin, laakiin asxaabtiisa la safray ayaa liitay lacag yar oo ay haystaan waxayna ku iibsadeen sii deyntiisa. Ugu dambeyntiina wuxuu gaadhay xeebta Badda Mediterranean-ka, halkaas oo uu toddobaad ka sugayay doon si uu ugu geeyo Yurub. Kadib, sedex saacadood ka dib markii ay badda ku degtay doon aad u buuq badan, markabkii ayaa shixnaday 58 ka mid ah rakaabkii kale ee la socdayna way wada dhinteen.
“Meydadku waxay ku dul sabayn jireen biyaha shimbiraha ayaa ka soo duulaya dhul gariirka oo bilaabay inay cunaan. Markay dooni kalluumaysi noo heleen, waxay u digeen Ilaalada Xeebaha Liibiya, kuwaas oo u yimid badbaadinta. Laakiin tan ugu naxdinta badan ayaa ahayd ka hor inta aysan na badbaadin, ay billaabeen toogashada dadka ku dhibaateysan biyaha. ”
Isaga iyo inta kale ee badbaaday ayaa dib loogu celiyay Liibiya oo xabsiga la dhigay. Liibaan hal sano ayuu ku xirnaa laakiin wuxuu ku guuleystey inuu cararo markii dagaal ka dhex qarxay qabaa'ilka maxalliga ah waxaana xabsiga dhigay maleeshiyo iska soo horjeeday. Liibaan wuxuu ku noqday kii tahriibay oo dul saaray doonta degtay si ay u habeeyaan isgoys kale. Mar labaad, doontii ayaa degtay, oo ay ku dhinteen 25 qof. Waxaa mar kale badbaadiyay markab Liibiya ah, laakiin halkii ay dib ugu celin lahaayeen, kabtanka markabku wuxuu wediyey Ilaalada Xeebaha Talyaani, kuwaas oo soo badbaaday badbaadintii una geeyay Talyaaniga.
“Marka, waxaan soo maray dhibaatooyin badan si aan Yurub u gaadho taasina noloshayda ayay ku dhacday. Laba jeer, waxaan dul joogay doon ku degtay badda. Khibradda ugu adag ee la ilaawi karo waxay ku jirtaa badda. Waa inaan naftayda iska iloobaa dhibaatooyinka iyo waxyaabihii aan arkay, sida unugyada dul sabeynaya hortayda. Ma ahan dhaawac jir ahaaneed; waa dhaawac maskaxeed oo qalbiga aan ku dareemo. ”.”